“ KORRI SABAA ” MILKIIN XUMURAMEE, KAN “ABO” TI !! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“ KORRI SABAA ” MILKIIN XUMURAMEE, KAN “ABO” TI !!
SEENAA Y.G (2005) – kutaa 3ffaa FI xumuraa.
Korri Sabaa ABO 4ffaa xumuramee jira. Warri kanaan dura Korri gaggeeffamuu hafe jedhanii qeeqaa fi akka hanqinaatti meeshaa godhachaa turan, gaggeeffamuu kora kanaa irratti yaada qaban hin laannee . Kun ka agarsiisuu, durumaanu Korri Sabaa gaggeeffamu fi dhiisuun quuqamanii osoo hin taanee, Ummata hawwachuuf itti fayyadamuu argisiisa. Kan irraa dubbatan, Hogganoota filaman irratti qofaadhaa. Kunis hiikkaa mataa isaa qaba. Namoonni Oromoof fakkeessanii yeroo hundaa arraba dheeressan, har’aa taajjabamaa jiru. Korri kun murteelee dabarsee jira. Murtee kana irratti yaada atu hin kenniin ykn yaada ijaaraa osoo hin gumaachiin bakka madaa isaanii, Hogganoota muudaman qofa irratti xiyyeeffatan. Kunis keessa isaanii fi fedhii isaanii ifatti saaxila. Dhugaan dhugaadhaa. Yoomillee bakka ishee hin hanqattu. Waa’ee kora sabaa irratti yaada jiru xumuruu baadhuus, qabxiilee hafan yeroo itti eeggachaa yaadoota walii galaatti ce’aa.
Jabiina Kora ABO 4ffaa :-
Yeroo hedduu waan gaggeeffannu hundaaf of eeggannoo fi iccittaawaa taasisuu irratti rakkoo ykn hanqina qabna turre. Har’aa garuu guutummaatti kan duuchamee ta’eera. Korri sabaa kun ega eegalamee kaasee hanga har’aan tanaatti odeeffannoo Ummata bira ga’uu danda’an irraa kan hafee, qaamuma ilaallatu qofa birattihafuun isaa jijjiirama guddaadhaa. Warri Holola afuufuuf wixifachaa turan, hanga dhaabni waan gaggeeffatee ofii isaatiin ibsatutti obsuu dadhabanii rakkachaa turuun isaanii beekamaadhaa. Hanga ammaattillee waan gaarii keessa barbaachurra, rakkoon umamee jiraa ? jedhanii warra qooda irraa fudhatee rakkisaa jiran. Garuu waa takkallee hin jiru. Gonkumaa jabiina kana ol kaasuu hin barbaadan. Kanaaf adeemsa baranaa irratti injifannoo ol aanaa goonfachuu dhaabaa mirkaneessuun barbaada.
Abbaan Murtii gama hundaa eenyu ?
Abbaan murtii inni dhumaa harka Ummataa jira. Korri kun waan murteessee hojiitti hiikamuu fi dhiisuu eenyullee gilgaalee Ummatatti himuu ykn ittiin holola walirratti oofuun hin danda’amuu. Ummati Oromoo murteeleen KS hojii irra akka ooluu barbaada. Murteelee kana dhugeessuufillee gama isaan qophiidhaa. Kanas gilgaalee hojiirra ooluu fi dhiisuu isaa Sabuma Oromoo qofaa ilaallata. Ummati keenya xiinxalaa tokko malee waan barbaaduuf abbaa itti godhuu danda’aa. ABO kanumaan gilgaalama. Oromoon Warra holola oofanis hojiima isaaniin gilgaala. ABO abaaruu fi kuffisanii Ummata kana qabachuuf warra deemuun hojiima isaaniin kan madaaluu Oromoodhaa. Ummati dhugaan kan isaaf qabsaa’ee qabseessisu barbaada. Amma ABO hojjachuu mitii, dhiqaa isaayyu kan hin hojjatiin, yoo ABO abaaree , Ummati eenyurraa abdii akka qabu beeka. Har’aa bakka kaleessaa hin jirru. Gonkumaa Alaabaa qabatanii fiiganiif wanni ta’uu tokkollee hin jiru. Beekumsan qabaan, seenaan beekaan, nuuti dimokiraatawaadhaa kkf jedhanii Ummata abbaluun dhumateeraaf. Oromoon dhiiga dhangalaasaa fi lafee isaa caccabsee Daangaa isaa kabachiifataa jira. Ummata sadarkaa kanarra jiru, arrabaan dabsachuun gonkumaa waan hin yaalamnee. Warra dhaaba siyaasaa ta’uu mtii, daboofiyyuu waliin dhaabbachuu irra hin geenyerraa abdiin Ummati kun qabaachuu maluu maalii ? Namni OPDOs abaaree, ABOs abaaruu dhaabbiin isaa maalii ? ykn dhaaba siyaasaa ta’anii of hin beeksisan, ykn dhaabbilee gargaarsaa hin ta’an. Garuu namuuma abaaruu, busheessu. Kun hundi murtiima ummataan bakka isaa qabachaa deema.
ABOn waa lama dhugeessee jira.
ABOn waggaa 40 jiraachuun isaa , maaliif gama tokko qofaan ilaallee, madda rakko taasifanna? ABOn waggaa 40tti injifachu maaf dadhabee ? jedhanii kanneen afarsan, osoo nama siyaasaa isa dhugaa ta’anii ykn qaawwaa kanaan warra dhimma itti ba’uu barbaadan osoo hin taanee, waggaa 40 guddisanii hin ilaalan turan. Yoo dheeratees, maaliif dheeratee ? jedhanii xiinxala mataa isaanii gaggeeffatanii yaada madaalawaa laatu turan. Yaada kana ragaa waliin dhiheessuuf yeroo biraaf dabarsee, har’aaf ka ga’uu qofa ykn warri barreeffama kana dubbiftan akka 0f-gaafattaniif karaa isiniif saaqa. Dhaaba ykn Mooraa Qabasoo Oromoo ganamaarraa kaasee Seenaan Gootummaa Nama boonsan akkuma jiran, kan hedduu nama gaddisiisan ni jiru. Madda rakkoo waggaa 40 ta’uu kan danda’an. Gama biraan Dhaaboota siyaasaa Oromoo keessaa hojjatuus dhiisuus kan Oromoof dubbachaa hafee kam ? warri isa komatan ykn furmaata fiduu dadhabee jedhan, waggaa tokkoyyuu waliin turuu dadhabaa hin jiranii ? dabalataan mee gaaffilee kana of gaafadhaa .
Waggaa 40 keessatti kanneen dhaaba kana ganani diinatti galan meeqa?
kanneen gananii gama waraanaanis ta’ee siyaasaa iccitti jiru diinaaf kennan meeqa?
Ilmaanuma Oromoo Jaallan isaanii dabarsanii kennu, summiin fixuu fi kkf raawwatan meeqa?
Kanneen dhaaba kana keessaa ba’anii dhaaba kana diiguu barbaadan meeqa?
Dhaaba kana keessaa ba’anii ABO kan biraa dhaabuuf kanneen yaalan meeqa?
Kanneen qabsoo dandamachuu dadhabanii keessaa ba’anii jiran meeqa?
sababaa adda addaan dhaaba kana saamanii dingadeen cabsuu yaalan meeqa?
,,,,,,gaaffiilee akkasii kuma tarrisuu dandeenya.
Rakkowwan kun, dhaaba duubatti harkisumoo, ni furgaasu ? qabxiileen kunniin, dhaaba kana jabeessuuf ykn waggaa 20ttu bilisummaa akka argatuuf hin taasisan. Nama ganee fi saamichaan dhaaba butachisuuf Hoggana qeequun sirriidhaa ? waggaa 10, 15, 20 ….isin walii turee waan jiru hundaa yoo fuudhee wayyaaneetti galee, hoggana akkamiin qeeqinaa ? waggaa 40 harkifattan jennee sababa dubbii akkamiin taasifanna ? kanaafin madda isaa ilaallee haa qeeqinuun jedha. kun hundi ta’ee garuu qabsaa’oonni cichan inuma jiru. Dhaloota gantummaa illee hin beeknee ijaaranii , Qabsoo dhaalsiisuuf qophaa’aniiru. Qeerroon hojii dadhabbii isaaniitii. Kanammoo ifatti mirkaneessaniiru. Gantuun keessaa ba’aa deemuun dhaaba kana keessa isaa itichaa fi icittaawaa taasisaa dhufee. Kanaaf ABOn dhaloota haaraa abdii irraa qaban uumee , Kora sabaan humna itti godheera. Kana eenyutu raawwatee ? eenyutu hojiima bal’aa hojjatee asi ba’ee ? Qeerroo Bilisummaa Oromoo hojii qabatama argisiisaa jiru ABOn uumuu isaatti kanneen hin gammannee, Qeerroo Oomiyaa jedhanii faajjii haaraa uumanii dhaloota diiguuf hin jiranii ? maarree eenyutu eenyuun gawwamsaa. ABOn seenaa lama gadi dhaabeera. Qeerroo Bilisuummaa Oromoo ijaaree wayyaanee raaseera. Gantootas cabseera. Inni lammaffaa Kora sabaa milkiin xumureera.
Yaada walii galaa :-
Oromoo mirga Abbaa Biyyuumma isaa gonfachiisuuf kan isa ijaaruu fi falmaaf isa hiriirsuu barbaada. Dhibbaa dhibbatti hojiidhaan kan isa amansiisuu barbaada. Oromoon waggaa 20 durayyuu , kan isatti fakkeessee deemuu addaan baasee beeka ture. Har’aa ofiinuu qabsoo gaggeeffachuu akka danda’uu mirkaeessaa jira. Ummata akkasii kana holola miidiyaadhaan gawwamsinaan wallaalummaadhaa. Ummata keenyaa Miliyoona 45 ol qabnaa jennee itti boonaa, deeggartoota facebookii 70 fi 100n of tuuluun wallaalummaa isa dhumaatii .ABOf qeeqinii ijaaraan rakkoo tokkollee hin qabu. Wayyaanee ari’uu ykn Biyya keenyaa baasuu qabaanaa jechaa, ABO fi hoggana isaaf du’aa hawwuun gonkumaa aantummaa hin mul’isu. Ummata keenyaa Biyya keessaa wareegamaa jiruuf jennee, wal abaaruu fi wal kuffisuu haa dhiifnuu. ABOn waggaa amma kana holola keessaa fi alaa dandamatee asi ga’eera. ABOn firii hojii isaa arguyyuu hin eegallee. Reefuu gara hojii qabatamaatti seenaa jiran. Hojii qabatamaan kan biyya keessaa argaa jirru kanadhaa. Oromoon Bilisummaan barbaada ykn wayyaaneetu Biyyaa na baasee jedhu tokko ykn Ummati kun gabrummaa jala jiru tti amanuu tokko, ABOn jabaachuu irraa maaliif aara ? maaliif gammachuu hin qabaatu ? garaagarummaan fedhee jiraatu, bu’aa argamu irratti waliif gammaduu kan dhawwu jiraa ? bilchinni akkasii bakka hin jirreetti akkamiin wal dhaggeeffachuun danda’ama ? herreegnii ABOn Ummata biratti jaalala qabaa, kanaaf ABO isa ganamaa dhabamsiifnee , ofiin ABO qabanna jedhanii karoora baafachuun dhugumaa fayyummaadhaa ?
Dubbiin baayyateef maal hin godahn jedhanitii , Korri Sabaa baranaa “GADAAN XUMURA GABRUMMAATII !! jedhaa, wal dhaggeeffannee wal jala haa yaanuu. Hinaaffaa habashootaa of- keessaa haa gannuu. Gonkumaa shirri fi anatu caalaan furmaata nuuf hin taatuu. Furmaatii Oromoo kan Biyya keessaa gaggeeffamaa jiruudhaa. Kan Ummata kanaaf dhaabbadhee jedhuu hojiidhaan ummatatti haa ba’uu. Wal mookisuu fi wal gondolchuun yeroon isaa dabreera.ABO fi QEERROOF galanni haa ga’uu, har’aa yaaddoo hin qabnuu. Maal taanaa ? hin jennuu. Abdii guutuu qabnaa. Waan afarfamuu nu hin raasuu . dhimma Oromoo keessa dantaa hin barbaaddanuu. Dhugaa qofaa barbaannaa. Humna Oromoo irratti of goobsuuf deemuu gankumaa Oromoon ijaan argu hin fedhuu. Siyaasi Soofaa irraa, siyaasa qoree keessaan wal hin simtuu.
DW – የጀርመን ድምፅ ሬድዮ አማረኛ ዜና ትንታኔ..September.. 9/2017
OMN: ሰበር ዜና (LIVE) Sept 11, 2017